Komii artistoota Oromoo
Artistoonniifi weellistoonni aadaa guddisuu, tokkummaa uumuufi biyya keessatti jijjiiramni barbaachisu akka jiraatu taasisuu keessatti gumaacha olaanaa qabuu. Kanumarraa ka'uun Ministirri Muummee Mootummaa RFDI, Doktar Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana artistootaafi weellistoota waajjirasaaniitti mariisisaniiru.
Ta'us artistoonniifi weellistoonni Oromoo waltajjicharratti hirmaachuu dhabuun komii isaan keessatti akka uumamu taasiseera.
Weellisaan Adam Ahmad yaada Gaazexaa Bariisaatiif kenneen akka jedhutti, artistoonniifi wellistoonni naannichaa waltajjicharratti hirmaachuu dhabuun komii isaan keessatti uumeera.
Rakkoo kana kan uume qaama odeeffannoo artistootaafi weellistootaaf dabarseedha. Kunis artistoonniifi weellistootni Oromoo ergaa Doktar Abiyyi waltajjicharratti dabarsan kallattiidhaan akka hin hordofne taasiseera jedha.
Artisti Kadir Filatoo gama isaatiin akka jedhutti, waamichi Doktar Abiyyi artistootaafi weellistootaaf taasisan kallattiidhaan artistootaafi weellistoota Oromoo bira hingeenye. Kunis artistoota, weellistootaafi ummata Oromoo mufachiiseera.
Artistootniifi weellistootni Oromoo kan hinfayyadamneefi beekamtiin kan hinkennamneef yoo ta'e, namni isaan kabaju hinjiru. Artistoonniifi weellistoonni Oromoo yeroo baay'ee akka dhiibamaniifi rakkoo qindeessitootni sagantichaa uumaniin waltajjicharratti argamuu akka hindandeenye dubbata.
Artistoonni guddinaafi jijjiirama biyyattiif tokkummaan akka hojjetaniif hundinuu ija tokkoon ilaalamuu qabu kan jedhu artistiin kun, walitti eda'amna jechuun afaan qofaan utuu hintaane gochaanis mul'achuu qaba jedha.
Ministeerri Aadaafi Tuurizimiis komii artistootaafi weellistootni Oromoo dhiyeessan sirrii ta'uufi dogoggorasaa ta'uu amanee fudhatee dhiifama gaafateera kan jedhu artisti Kadir, gara fuulduraattis dogoggorawalfakkaatu akka irra hindeebineef waadaa seeneera jedha.
Ergaa Doktar Abiyyi walitti eda'amnee tokkummaadhaan biyyattiif haa hojjennu jedhan gad bu'ee hojiidhaan mul'achuu qaba. Kun ta'uu baannaan ummanniifi mootummaan walhabuu danda'u jedha Artisti Kadir.
Waltajjii marichaarratti kan hirmaate Artisti Humneechaa Asaffaa gamasaatiin akka jedhutti, waltajjicharratti kan hirmaatan artistoota Amaariffaan hojjetaniidha. Artistoonni Oromoo waltajjicharratti hirmaachuu dhabuun komii kaaseera.
Artistoonniifi weellistoonni Oromoo komiisaanii Ministeera Aadaafi Tuurizimiitti dhiyeeffataniiru. Ministeerichis artistoota Oromoo hamma tokko waamee doggora uumeef dhiifama gaafateera. Gara fuulduraatti dogoggora walfakkaatu akka hinuumneefi waadaa isaaniif galuusaa dubbata.
Torban kana/This_Week 4957
Guyyaa mara/All_Days 1642552